» सूर्यजी, षड्यन्त्रको राजनीति कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ ?
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०८:४७
श्री सूर्य थापाजी !
सन्दर्भ विदितै छ– तपाई अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ । साथै बारम्बार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई लक्षित गरी विभिन्न कुरा लेख्ने गर्नुहुन्छ । बालुवाटारको शासकीय वृत्त, संस्कृति र कार्यशैलीबारे म आफैं जानकार छु । डा. बाबुराम भट्टराई करिब १९ महिना प्रधानमन्त्री हुँदै मैले पनि नेपालको शासकीय प्रचलन, संस्कृति र कार्यशैली नजिकबाट देखेको, भोगेको छु ।
तपाईले लेख्ने भन्ने कुराहरु ‘तपाईका हैनन्’ भन्ने राम्रो जान्दछु । व्यक्तिगतरुपमा वर्तमान सरकारप्रति तपाईको के धारणा थियो भन्ने कुरा तपाई सल्लाहकार हुनु अघिका टिप्पणी र पुराना पोष्टहरु खोलेर हेरे हुन्छ । नैतिक प्रश्न गर्ने हो भने एउटै पार्टीभित्र पनि ‘राजनीतिक लाइन’ नमिल्दा यस्ता नियुक्ति लिने प्रचलन संसदीय लोकतन्त्रमा हुँदैन । तर आज म त्यो प्रश्नतिर पनि जान्नँ ।
तपाईलाई थाहा हुनु पर्दछ कि केपी शर्मा ओली र डा. बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिमा सर्वथा दुई भिन्न दृष्टिकोण भएका नेता हुन् । यो भिन्नता आज सृजना भएको हैन । उहाँहरुको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ नै त्यसरी भएको छ ।
ओली झापाली मालेधारबाट आउनु भो । भट्टराई चौमधार र मसाल हुँदै आउनु भो । त्यो बेलादेखि नै उहाँहरुको दृष्टिकोणमा भारी भिन्नता थियो ।
२०४६ साल ताका माले वाममोर्चामा थियो । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा भिन्नै संयुक्त जनआन्दोलन समिति थियो । तत्कालीन एमालेले ‘राजतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय’ भनिएको संविधानलाई मानेर हिड्यो । डा. भट्टराईले त्यो संविधान कहिल्यै स्वीकार गर्नु भएन । त्यो संविधानको तहत कहिल्यै कुनै चुनाव लड्नु भएन । तपाईलाई गोर्खाको त्यतिखेरको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ज्ञान होला– पदकै लोभ गरेको भए २०४८ सालकै चुनाव उहाँले जित्नु हुन्थ्यो । गोर्खा एमाले गणनामा पनि थिएन । जनमोर्चाका उम्मेद्वारले कांग्रेसलाई नजिकबाट टक्कर दिएका थिए ।
डा. भट्टराईले जस्तै अप्ठ्यारोमा पनि ‘संविधानसभा र गणतन्त्र’ लाई आफ्नो राजनीतिक बटमलाइन बनाउनु भो । माओवादी आन्दोलन मूलतः नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने आन्दोलन थियो । त्यो आन्दोलनभित्र उहाँले ‘संघीयता, उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति र समावेशिताको मुद्दा’ छिराउनु भयो । माओवादी पार्टीले जनयुद्ध गरेको केही वर्षपछि ‘१३ प्रदेशसहितको संघीय ढाँचामा पार्टी संगठनलाई ढालेको’ तपाईलाई सम्झना हुनु पर्दछ । आज प्रचण्ड त्यो मुद्दा बोक्नु हुन्छ कि हुन्न, उहाँलाई नै थाहा होला । बाबुराम अझै पनि बोक्नु हुन्छ, किनकी त्यो उहाँको मौलिक स्वीकृति भएको मुद्दा हो । ओलीजीलाई न संविधानसभासँग, न गणतन्त्रसँग न संघीयता र समावेशितासँग कुनै मतलब थियो ।
अर्को दुईवटा सन्दर्भ याद गराउँछु– चुनवाङ र पालुङटार बैठकबारे । राजा ज्ञानेन्द्रको ओभरटेकपछि बाबुरामबाहेक केही कमरेडहरु राजासँग सम्झौता गरेर कम्बोडिया मोडेलमा राजतन्त्र राख्ने दाउमा हुनुन्थ्यो । डा. भट्टराईले नै जोखिम मोलेर माओवादी पार्टीलाई सात संसदीय दलसँग सम्झौता गर्ने लाइनमा पुर्‍याउनु भो । त्यो अवधिमा डा. भट्टराईलाई माओवादी जनसेनाले बन्दी बनाएको र उहाँको जीवन जोखिममा परेको बारे सुन्नु भएकै होला ।
अर्थात् माओवादी र सात संसदीय दलको १२ बुँदे सहमतिको राजनीतिक लाइन उहाँकै प्रयासमा बनेको थियो । माओवादीको पालुङटार बैठक सेरोफेरोको कुरा पनि सम्झाउँ । त्योबेला प्रचण्ड ‘जनविद्रोहको कार्यनीति’ मा हुनुहुन्थ्यो, ‘शान्ति र संविधान’ डा. भट्टराईको लाइन थियो । ‘जनविद्रोहको कार्यनीति’ को कार्यनीति सफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर परीक्षण गर्न छ दिने आम हड्ताल भएको र त्यो पार नलागेपछि तत्कालीन माओवादी पार्टी बाबुरामले उठाउँदै आएको शान्ति र संविधानको लाइनमा आएको बुझ्नु भएकै होला ।
यी सबै घटनाक्रममा डा. भट्टराईका राजनीतिक अडानहरु कहाँ थिए, प्रष्ट छ । संविधानसभा, गणतन्त्र, उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति, संघीयता र समावेशिता, ७ दलसँगको सम्झौता, शान्ति र संविधानको कार्यदिशाा, समग्रमा ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को बाटोमा हिंडेको पार्टीलाई ‘संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रमा अवतरण’ । आज देश जहाँ छ र जुन राजनीतिक लाइन स्थापित भएपछि ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसमा डा. भट्टराईको योगदान कति र प्रम ओलीका अडानहरु के कस्ता हुन्थ्ये एकपटक राम्ररी सम्झिनु होला ।
अझ पछिल्लो चरणमा सेना समायोजन र क्यान्टोनमेन्टको समस्या कसरी जटिल हुँदै थियो, त्यो सम्झिनु होला । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा क्यान्टोनमेन्टको क्रोनिक हुँदै गएको समस्या कसरी एक रातको रिस्कमा हल गर्नु भो, त्यो सम्झिनु होला ।
करिब १७ वर्ष यता म व्यक्तिगत रुपले डा. भट्टराईसँगै छु । व्यक्तिगत जीवनमा उहाँले उठाउनु भएको जोखिमको तपाईंहरु कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न । त्यो भिन्नै कुरा हो कि त्यतिखेर जोखिमहरुको बीचबाट गुज्रिएर पनि उहाँ सकुशल रहनु भयो ।
जुन पिएचडीको कुरा तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ नी– त्यो सक्दा उहाँ २३ वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ क्रान्ति छोडेर पढ्न जानु भएको हैन । विद्यार्थी उमेरको निरन्तरता हुँदै पढनु भएको हो । यहाँ अर्को कुरा सम्झाउँ, त्यतिखेर पनि उहाँ दिल्लीमा पढ्नु मात्र हुन्थेन । नेपालमा सानो मानिने मसाल पार्टीको भारत प्रवासी संगठन ‘एकता समाज’ किन तत्कालीन माले/एमालेको भन्दा निक्कै ठूलो संगठन मानिथ्यो, त्यो सोच्नु होला ।
आज तपाईहरुको कुरा प्रचण्डसँग मिलेको छ, डा. भट्टराईसँग मिल्दैनन् । तर प्रचण्डजीसँगको एकता वैचारिक कम र पावर पोलिटिक्स बढी हो भनेर आरोप लगाउनेहरुको आशंका बलियो बन्दै गइरहेको छ । डा. भट्टराई अहिले पनि वैचारिक नेता हो । त्यसका ५ वैचारिक कारण छन्-
एक– शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न
दुई– प्रदेश पुनर्सीमाङ्कनको प्रश्न
तीन– नेपालका सीमान्तकृत उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति र सशक्तिकरणको प्रश्न
चार– समग्र विश्व साम्यवादी आन्दोलनको पुनर्मुल्याङ्कन र समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ वैचारिक उच्चाई दिने प्रश्न र,
पाँच– नेपालका सन्दर्भमा विकास, सुशासन र समृद्धिलाई एक नयाँ ढाँचामा आकारित गर्ने प्रश्न ।
यी ५ एजेण्डामा प्रम ओलीका अडान के हुन् ? प्रचण्डका द्विविधाहरु के हुन एकपटक राम्ररी सोच्नु होला । हिजो २०५० को दशकमा डा. भट्टराईले संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता कुरा उठाउँदा तपाईहरुले पत्याउनु भएको थियो र ? ठीक त्यसै गरी हेर्नु होला– आउने केही वर्षभित्र डा. भट्टराईले बाँकी एजेण्डा पनि पुरा गरिछोड्नु हुन्छ । ‘सानो पार्टी’ भन्ने भ्रम हटाउनु होला । हिजो संयुक्त जनमोर्चा वा माओवादी कत्रो पार्टी हो र ? त्यसको तुलनामा आज डा. भट्टराईको पार्टी र समर्थनको दायरा धेरै ठूलो छ ।
जहाँसम्म डा. भट्टराईका ट्वीट तिखा र घोच्ने हुन्छन् भन्ने तपाईहरुको आपत्ति छ, त्यो उहाँको शैली हो, झर्रो गाउँले भाषा प्रयोग गर्नु हुन्छ । तपाई प्रम ओलीका हिजोको ती भाषण याद गर्नुस् त एकपटक उहाँ माओवादीहरुलाई कसरी गाली गर्नु हुन्थ्यो ? ‘रोल्पाली बिरालो’ वा ‘माका फुई’ जस्ता शब्द त डा. भट्टराईले प्रयोग गर्नु भएको छैन नी ।
मित्र सूर्य जी !
मानव जातिको इतिहास संघर्षको इतिहास हो । संघर्ष विना प्रगति हुँदैन । प्रम ओली र पूर्व प्रम डा. भट्टराई अहिले दुई फरक वैचारिक ध्रुवको नेता हो, उनीहरुको बीच संघर्ष हुन्छ, त्यो नै आजको नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ हो, त्यो नर्बिसनु होला । अरु त कुनकुन नेताबीच के वैचारिक भिन्नता छ र ?
तपाईहरुसँगको हाम्रो संघर्ष किन पेचिलो हुँदैछ, नभन्दा पनि हुने एउटा कुरा भन्दिउँ– यो नठान्नु होला कि बालुवाटारका सूचनाको पहुँचबाट हामी टाढा छौं । सरकारमा तपाईहरु हुनु होला, तर समग्र सत्तामा हाम्रा पनि शुभचिन्तक छन् । तपाईहरु कसरी राजनीतिक षड्यन्त्रको तानावाना बुन्नु हुन्छ, कसरी डा. भट्टराई र अन्य केही नेताहरुलाई फसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ ।
अध्यादेश प्रकरण र मेरियट होटल प्रकरण के थियो, कसरी फ्लप खायो भन्ने स्मरण गर्नु होला । नेपाल ट्रष्टको झुठो श्वेतपत्रको उद्देश्य के थियो, आज त्यो कसरी बिलाएर गयो, त्यो पनि याद गर्नु होला । हामी तपाईहरु जस्तो कुनै षडयन्त्रको राजनीति गर्दैनौं । तर ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ मा तपाईहरु भन्दा कम छैनौं भन्ने पनि याद राख्नु होला ।
डा. भट्टाईले संसदको रोष्टममा उभिएर मातातीर्था जग्गाबारे खुलेआम कागज देखाइदेखाई बोलेपछि तपाईहरुको षड्यन्त्रको पन्तुरा किन अदृष्य भयो ? सबै थाहा छ ।
प्रम ओलीले जुन प्रकारको संघर्ष गरेर आउनु भएको छ डा. भट्टराई त्यो भन्दा कम्तीमा सय गुणा बढी पेचिलो, जटिल र जोखिमपूर्ण संघर्षको मैदानबाट हिंडेको नेता हो भन्ने नर्बिसनु होला । समय सधैं कसैको वशमा हुँदैन । पछिल्लो समय केही जटिलताले उहाँलाई घेरेकै हुन् । राजनीतिकरुपमा थोरै कमजोर र असहज स्थितिमा पर्नु भएकै हो, तर त्यो अस्थायी कुरा हो ।
अन्तिममा यो प्रष्ट गरौं– व्यक्तिगत रुपमा हाम्रो तपाईहरुप्रति कुनै दुर्भावना छैन । प्रश्न मूलतः वैचारिक र एजेण्डागत नै हो । शासकीय शैलीमा रहेको भिन्नता नै हो । जनसरोकारका प्रश्न नै हुन । डा. भट्टराईको शासनकालसँग केही उडन्ते कुराहरु जोडेर, त्यसैलाई आवरण बनाएर तपाईहरुले यति, ओम्नी, बाँस्कोटा सबै प्रकरण ढाकछोप गर्न सक्नु हुन्न । त्यो मुर्खता नगर्नु होला ।
आँट छ, प्रमाण छ भने छानबीन गर्नुस्, तपाईहरुसँग सत्ता छ अहिले कस्ले रोक्न सक्छ ?
केही राजनीतिक कुरा पनि गरिहालौं । हामीलाई पनि थाहा छ- संविधानसभा र गणतन्त्र तपाईंहरुले रोजेको बाटो होइन । बाध्यताले हिंड्नुभएको बाटो यति धेरै पार गरिसक्नुभयो कि अब तपाईंहरुलाई पछाडि फर्कन पनि अप्ठेरो छ, अगाडि बढ्न पनि रुचि छैन । सरकारी अन्यौल यसरी हेर्दा एजेन्डा र विचारको अन्यौलभन्दा केही होइन ।
औषधि हालेर पकाएको केरा पनि पहेंलो नै हुन्छ । तर स्वाद भने अलि खल्लो हुन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा तपाईंहरु यही कारणले खल्लो लागिरहेको छ । सिधा भन्दा दूधको साक्षी बिरालो भनेजस्तो भएको छ । संघीयता भनेको छ, न पुनर्संरचना ठिक छ न अधिकार दिइएको छ । समावेशिता भनेको छ, मन्त्रिमण्डल मात्रै समावेशी बनाइदेऊ न भन्दा एनजिओको ट्याउँट्याउँ भनिदिनु हुन्छ । गणतन्त्रको संरक्षण गर्नुछ, सामन्ती हठ, दम्भ नलुकाएरै राजाकालीन संस्कारहरुलाई जीवन्तता दिइरहनु भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाहरुमाथि तपाईंहरुको सौतेलो व्यवहारले नेकपाभित्र रहेका प्रगतिशील शक्तिहरुको मन रमाइरहेको छैन । बालुवाटार र ओली समूहले राजनीतिको नाममा गरिरहेको अराजनीतिक खेलले सीमा नाघ्न थाल्यो भने मुलुकमा नयाँ ध्रुवीकरण पनि हुनसक्छ । यस्तो बेला परिवर्तनका एजेन्डाहरुलाई अभिभावकत्व लिन तयार शक्तिहरु एकाठाउँमा आउनै पर्ने हुन्छ ।
नेकपाभित्रको विवादको राजनीतिक समाधान नखोज्दा बढीरहेको सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाहरुलाई अध्यादेशदेखि अन्धाधुन्ध गालीले रोक्न सक्दैन । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बन्ध्याकरण गरेर लोकतान्त्रिक अक्सिजन अभाव भइरहेको छ । मानिस रोग, भोक र अभावले निस्सासिएर चिच्याउँदा तपाईं सरकारको विरोध गरेको देख्नुहुन्छ । सरकार र जनताबीच बढिरहेको दूरी बाबुरामलाई गाली गरेर घट्दैन । ऐना पुछ्ने भन्दा अनुहारको धुलो पुछ्ने कि ?
बाँकी मौका मिले भेटभाटमा कुरा गरौंला । धन्यवाद ।
श्राेत : साझापाेष्ट
कोरोना संक्रमित थप ७ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४३६ पुग्यो
जडिबुटी खोज्न जाँदा भीरबाट लडेर गुरुङको मुत्यु
आज बढ्यो सुनको मुल्य ,तोलाको कसरी
फेसबुकमा पत्रकारलाई गालि गर्ने पौडेल पक्राउ
पेट्रोलको मूल्यमा बृद्धि
कांग्रेसले सामाजिक दुरी कायम गर्दै सरकारविरुद्ध देशभर आन्दोलन चर्काउने